I-Semalt Expert: Indlela yokukhusela izikhangiso Kwi-Android Apps, Imidlalo kunye nabaphequlula
Izikhangiso ziye zaba yizinto ezimbi ezifunekayo, kwaye izicelo ezahlukeneyo kunye neewebhusayithi zinikeza isofthiwe yamahhala, umxholo wamahhala kunye neenkonzo zamahhala kuba abathengisi bahlawula. Ngaloo ndlela, ababoneleli ngeenkonzo kufuneka bakhonze iintengiso kwiindwendwe zabo kwaye bavelise imali yokugcina kwabo kwihlabathi lezoshishino ixesha elide. Bayafuna kwakhona imali yokufumana iinkonzo kunye neentsika kunye nophuhliso - oculos oakley enduro masculino. Abasebenzisi bavuna iinzuzo zokusebenzisa iimveliso zabo mahhala. Nangona kunjalo, ukufakwa kwezibhengezo kubangelisekile kwaye kubandakanyeke kumava angabonakaliyo kumsebenzisi.
Nakhu uMichael Brown, ochwephesha ophezulu Semalt Iinkonzo zeDivarti, uya kukuxelela ezinye iindlela zokukhusela iintengiso kwidivaysi yakho ye-Android.
Unokuthintela lula inani elikhulu lezikhangiso ukuba zingabonakali kwimidlalo yakho kunye nezicelo, kunye nezikhangeli zakho. Siyathemba ukuba ezi ndlela ziza kusetyenziselwa zombini izixhobo ezingasisisigxina kunye nezisisiseko, kodwa ngaphambi kokuba siqale, kufuneka ube neMphathi weFayile njenge-Astro File Manager. Abanye abaphathi befayile bangasetyenziselwa, kodwa kufuneka uzame ukuvimba iintengiso kwiingozi zakho. Asinabangela yiphina imiphumo kwisixhobo sakho se-Android.
Indlela # 1. I-Adblock Plus (ABP)
Kulo ndlela, uza kusebenzisa ab-blockers (izicelo) ukukhusela zonke iintengiso kwidivaysi yakho ye-Android, njengeentengiso ezibonakaliswa kwimidlalo eyahlukeneyo kunye neefowuni. Ngombulelo, kukho iindidi ezahlukeneyo ze-ad-blockers kubasebenzisi be-Android kunye nabaphuhlisi be-app..Eyona nto ibhetele, kunjalo, i-AdAway ne-Adblock Plus (ABP). Ungafaka nayiphi na yale nkqubo ngokusekelwe kwimfuno kunye nokulindela. Ukuba ufuna ukukhusela iintengiso nge-Adblock Plus, makhe ndikuxelele ukuba le nkqubo yowumthombo ovulekile kwaye unokhetho lokuvumela iintengiso ezingabonakaliyo. Le ndlela ifanelekile zombini izixhobo ezingenagxininiso nezisisiseko. Uyakwazi ukufaka lula ukufaka i-ad-blocker app kwisixhobo sakho, kodwa ukulayishwa kwimizuzu kufuneka rhoqo njengoko i-Google isanda kususwa zonke i-apps-block kwi-Google Play Store.
Indlela # 2. Vimba iziThuthi kunye neFayile 'yemikhosi'
Unokubambelela lula zonke iintengiso ezingafuneki usebenzisa ifayile yefayile. Le ndlela ikuvumela ukuba unqande inani elikhulu lezentengiso kwidivaysi yakho ye-Android kwaye usebenza kwiidivaysi ezisisiseko kuphela. Ifayile yefayile yifayile ecacileyo kwinkqubo yakho yokusebenza. Xa ufuna ukusungula isayithi usebenzisa igama lomninimzi, inkqubo yayo yokusebenza izakukhangela iifayile ezamkelekileyo ukuhlola idilesi ye-IP ehambelana nayo. Ukuba iyaphumelela, idilesi ye IP echongiweyo iya kusetyenziswa. Ngaphandle koko, i-DNS (i-Domain Name Service) iya kufumana umbuzo malunga nendlela yokufumana IP yegama lomninimzi. Unokwenza lula ukuseta ifayile yefayile. Ngenxa yoko, kufuneka uhambe kwi-MVP kwisiphequluli apho ifayile evulekileyo iya kuvulwa. Gcina kwikhompyutheni yakho kwaye kamva ukopize ifayili yomshicilelo kuyo ukuya kwisixhobo sakho se-Android.
Musa ukulibala ukuqaphela indlela yefayili. Kwidivaysi yakho ye-Android, kufuneka uvule umphathi wefayili uze ukopize ifayili yomphathi kwindawo leyo.
Kuyinyani ukuba iintengiso ziyacaphukisa kwaye ziyakhathaza, kodwa ziyindlela efanelekileyo yokwazi malunga nemveliso yakutshanje, iinkonzo, iiwebhusayithi kunye nezicelo. Kufuneka uvumele iintengiso ezingabonakaliyo ziboniswe ukuba zibe nembono yento ehamba ngayo kule mihla. Ngaphandle koko, ungasebenzisa iifayili ezihlawulwe ukuyeka ezo ntengiso ziyakucasula kwi-intanethi.